Google Mepu muApple Auto inotora inogadziridza inobatsira yevatyairi veBritish
September 22, 2021 by bartez64
Android Auto ikozvino inoisa iyo yekufambisa bar uye shandura ruzivo kubva kuGoogle Mepu padhuze nekusvika kwevatyairi vekuUK. Izvo iwe zvaunoda kuti uzive Google Mamepu muAuto Auto yawana mutsva nyowani unogadziridza iyo app kune kurudyi-ruoko kutyaira mota. Iyo yekuvandudza inoshandura mamapu 'akakosha maficha padhuze nemutyairi mumigwagwa yeBritish. Android Auto inogadzirisawo dzimwe nyaya dzinoenderana… [Verenga zvakawanda ...] nezveGoogle Mepu mu = Android Auto inotora inogadziridza inobatsira yevatyairi veBritish
Samsung Galaxy Note dzakateedzana dzinogona kudzoka seyakapetwa chishandiso?
September 22, 2021 by billy16
Sezvataifunga kuti Samsung's Galaxy Note nhepfenyuro yafa, mushumo mutsva wabuda uyo unoti chishandiso chinogona kudzoka senge inopetwa. Sekureva kwevanhu kuSammobile, Samsung inogona kuvhurazve iyo Galaxy Note dzakateedzana muchimiro chakapetwa se "Galaxy Flex Note." Chinyorwa chakagadzira "pfungwa" inoratidza kuti iyo Galaxy Flex Note akateedzana angaite sei. … [Verenga zvakawanda ...] nezve Samsung Galaxy Note akateedzana anokwanisa kudzoka seyakapetwa chishandiso?
iPhone 13 Pro Max ongororo: Yakakura chaizvo iri nani?
Mumakore apfuura iyo iPhone Pro Max modhi yakagara ichipa zvimwe zvekuwedzera - senge mufananidzo kudzikamiswa kana yakakura zoom lens - kubatsira kuiisa parutivi seyekupedzisira iPhone. Asi kune 2021 iri nhanho yekutamba nhandare, mutsauko chete pamusoro peiyo Pro modhi kuve iyo Pro Max yakakura skrini uye hwakareba hupenyu hwebhatiri. Izvo zvichave zvinobatsira pamabasa akasiyana siyana, asi kwete… [Verenga zvakawanda ...] nezve iPhone 13 Pro Max ongororo: Yakakura chaizvo iri nani?
Aya ndiwo akanakisa Samsung Galaxy Watch 4 skrini inodzivirira
Kutsvaga yakanakisa Samsung Galaxy Watch 4 skrini inodzivirira yeyako kifaa kunoenderana nezvinhu zvishoma zvakakosha. Kutanga, iwe uchazoda kuve nechokwadi kuti urikusarudza chigadzirwa chinoenderana neyako chaiyo kesi saizi (40mm kana 44mm). Tevere, sarudza rudzii rwechidzitiro chekudzivirira chaunoda. Dzimwe sarudzo dzakakurumbira dzinosanganisira girazi rakadzikatidzwa rechidzitiro pamwe nemakesi ekudzivirira ekuvhara kwakazara. … [Verenga zvakawanda ...] pamusoro Aya ndiwo akanakisa Samsung Galaxy Watch 4 screen vadziviriri
Android 12.1 inogona kunge yakaratidza kuvapo kweimwe Pixel inopetwa
Chikwereti: Eric Zeman / Android Chiremera Iyo inotevera Android 12.1 inogadziridza inonzi ine mareferenzi kune yechipiri inopetwa Pixel. Iyo inonzi Jumbojack chishandiso inogona kunge iri yeku-kupeta foni yakafanana neyaSamsung foldable. Hazvina kujeka kana chishandiso ichi chichavhura padivi peGoogle Pasipoti inopetwa. Zvinotendwa kuti Android 12 ichateverwa ne Android 12.1,… [Verenga zvakawanda ...] nezve Android 12.1 inogona kunge yakaratidza kuvapo kweimwe Pixel inopetwa
Sennheiser CX Yechokwadi Wireless earbuds ongororo: Bhatiri kupenya pane bhajeti
Sennheiser nderimwe remazita ekare epasirese nyika, asi yanga isiri kugara mumaoko ayo mumakore achangopfuura - ine sarudzo dzevateereri pamitengo yemitengo, uye nepo maCB True Wireless mahedhifoni anogona kunge asiri echokwadi " bhajeti "vachiri kushamwaridzana nechikwama munzira dzakawanda. Nekudaro, ivo zvakare vanopinda mukati chaimo muchikamu chemusika chiri kuwana zvakawanda uye… [Verenga zvakawanda ...] nezve Sennheiser CX Yechokwadi Wireless earbuds ongororo: Bhatiri kupenya pane bhajeti
iPhone 13 bhatiri saizi yakaratidzwa: yakawanda sei yekuvandudza iwe yaunowana?
Apple yakabvisa iPhone 13 dzakateedzana svondo rapfuura. Iyo nyowani mireza kubva kuApple inovandudza makamera, diki notch, yakajeka chiratidzo, uye nezvimwe. (PS: Heano maitiro aunogona kuwana pre-yakatenderwa chikwereti cheiyo iPhone 13 kusimudzira chirongwa) Pakushambadza iyo iPhone 13 dzakateedzana, Apple yakataura kuti mafoni ayo matsva ane hupenyu huri nani hwebhatiri, achiti "iPhone 13 inopa 2.5 maawa anowedzera pamusoro pe iPhone ... [Verenga zvakawanda ...] nezve iPhone 13 bhatiri saizi yakaratidzwa: yakawanda sei yekuvandudza iwe yaunowana?
Maitiro ekugadzirisa Hunhu hweRuzha pane Samsung Galaxy Runhare
Ruzha mhando inogona kunge isiri chinhu chaunofunga nezvakawanda kana zvasvika kune yako smartphone, asi zvakakosha. Samsung Galaxy mafoni anouya aine anobatsira akaenzana ekureruka odhiyo marevhuru. Tichakuratidza mashandiro ayo uye nekuvandudza mhando yemimhanzi yaunoteerera. Chekutanga, Rova zvakasimba pasi kamwe kubva kumusoro kwako Samsung Galaxy mudziyo wacho chidzitiro uye vawane giya… [Verenga zvakawanda ...] nezve Maitiro Ekugadzirisa Ruzha rweMhando pane Samsung Galaxy Runhare
LineageOS 18.1 inounza Android 11 kuChromecast neGoogle TV, Walmart Onn uye Dynalink Android TV mabhokisi
Walmart's Onn uye Dynalink Android TV mabhokisi ndiwo maviri emhando dzakanakisa dzeTV TV dzinowanikwa muUS. Ivo vaviri vanoita isingasviki $ 50 uye vanopa hwakawanda hwakawanda hwezvinhu, kusanganisira 4K HDR rutsigiro uye makuru maremote. Izvo ivo vaviri zvavanoshaya, zvisinei, ndiyo yazvino vhezheni yeApple TV. Hatizive kuti, kana zvamboitika, michina iyi ichagadziriswa kuApple 11. Nhau dzakanaka… [Verenga zvakawanda ...] nezve LineageOS 18.1 inounza Android 11 kuChromecast neGoogle TV, Walmart Onn uye Dynalink Android TV mabhokisi
Kana iwe uchida kuyedza mutakuri weMVNO, tarisa idzi sarudzo
Iwo akanakisa MVNO vatakuri vanokwanisa kupa hukuru hwakakura neyakavharidzirwa kufukidza nekusimbisa netiweki yeimwe yevakuru vatakuri. Iyi setup inogona kutungamira kune yakafararira marongero uye kukuchengetedza iwe kunze kwechibvumirano kana iwe usiri kuda kusungirirwa kune chero anotakura. Inogona zvakare kuve nzira yakanaka kuyedza netiweki nyowani uye imwe yeakanakisa maserura kuronga pasina kushandisa mari yakawandisa kana… [Verenga zvakawanda ...] nezve Kana iwe uchida kuyedza mutakuri weMVNO, tarisa idzi sarudzo